कसलाई भने विश्व नेपालीले ‘अरुसँग’ हाँस्दै बोल भनेर ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentकसलाई भने विश्व नेपालीले ‘अरुसँग’ हाँस्दै बोल भनेर ? (भिडियो)
June 5, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Music, Videos 0
गायक विश्व नेपालीको आवाज रहेको नयाँ गीत ‘अरुसँग’ को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भुपेन्द्र नेउपानेको उक्त गीत ८,८४८ मिडिया हाउसको प्रस्तुतिमा सार्वजनिक गरिएको हो । भुपेन्द्र नेउपानेको शब्द तथा सन्तोष श्रेष्ठकोद संगीतलाई विश्व नेपालीले उत्कृष्ट तरिकाले गाएका छन् । उक्त गीतको भिडियोमा निरज बराल, सुमी सिलवाल तथा नविन अधिकारी फिचर्ड छन् । उज्जल देवकोटाले खिचेको उक्त गीतमा रविन जे अधिकारीको सम्पादन रहेको छ । गीतको भिडियोलार्य सुत्र इन्टरटेन्टमेन्टको यूट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।